Abakhiqizi be-Drawer Slide nabaphakeli | Angeza
Ikhaya > Imikhiqizo > Isitimela esishisayo > Ikhabethe isilayidi
I-Drain Slide iyifeshini efanelekile ebaluleke kakhulu ekuvuleni okubushelelezi noma ukuvalwa kwekhabethe. Isigaba se-Adduth sojantshi we-Slide sifaka lonke uhlobo lwama-slides anezinhlamvu ezintathu kanye nama-Slides we-Slide, i-FGV Box Drawer Slide, i-FGV Dracker Slides, Sifihliwe isilayidi njll. Sinengcebo yokuhlukahluka komkhiqizo esitimeleni somkhiqizo , nakanjani singakuthola okudingayo ngempela.
I-AddSth Drawer Slide yenziwe ngensimbi ephezulu ebandayo yensimbi ebandayo, ubuciko obukhulu bokupenda amandla okuvimbela ukwelashwa kokudonsa futhi hhayi kufonze kalula.
Kusetshenziswa izinto zokuqina zekhabethe zesilayidi futhi kusetshenziswa ukwakhiwa kwesampula, ubuciko obumnandi ukwenza umsakazo wangaphandle nojantshi wangaphakathi banamandla. Ngokuhlola okuqinile kwekhwalithi, kungadonswa kalula izikhathi ezingaphezu kuka-50 000.Use dessun kwenza ukuthi icwilisa kakhulu lapho icindezela futhi idonsa ikhabethe. Singanikeza izinketho ezahlukahlukene zokukhetha imibala, futhi ukuxhaswa okuhlukile kwezinto ezibonakalayo ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zamakhasimende emazingeni ahlukene. Isicelo se-Multi-Scene, elungele ukusetshenziswa kwamakhabethe asindayo kakhulu anjengewadi, amabhuki, amatafula aseceleni kombhede, amadeski wekhompyutha, njll.